Umthandazo we-Saint Augustine kwiNtombi kaMariya
Umthandazo weSaint Augustine kwiNtombikazi entlekileyo
Ukuxolelwa kweeNkozo zethu kunye nokuBuyisana
AmaKristu amaninzi, nangamaKatolika , acinga ukuba ukuzinikela kwiNtombi kaMariya oyintsikelelo kuphelile, mhlawumbi uphuhliso lwangaphakathi. Kodwa ukususela kwiintsuku zokuqala zeCawa , amaKristu amhlonele uMariya aze amfune ukumncenga.
Kulo mthandazo, uSaint Augustine waseHippo (354-430) ubonisa ukuhlonipha koMama kukaThixo kunye nokuqonda okufanelekileyo kokuthandaza. Sithandazela kwiNtombikazi entlekileyo ukuze sikwazi ukunikela imithandazo yethu kuThixo kwaye sifumane ukuxolelwa kuye ngenxa yezono zethu.
Umthandazo kaSaint Augustine kwiNtombikazi Eyintsikelelo
Wena Ntombikazi kaMariya, ngubani onokukuvuza ngokufanele ngokubonga kwakho kunye nokubulela, wena owamkela umhlaba owileyo ngokumangalisa kwakho ukuthanda kwakho? Ziziphi iingoma zokudumisa unobuntu bethu obuthakathaka buya kubhala ngokuhlonipha kwakho, kuba kukungenelela kwedwa kukufumene indlela yokubuyisela. Mkele, ngoko, ukubonga okunjalo okubuthathaka njengokuba silapha ukunikela, nangona bengalingani kwimilinganiselo yakho; kunye nokufumana izibhambathiso zethu, fumana ngemithandazo yakho ukuxolelwa kwezono zethu. Yithwale imithandazo yethu ngaphakathi kwendawo engcwele yabantu abaphulaphuli basezulwini, kwaye uvelise kuyo i-antidote yokuxolelana. Kwangathi izono esizizisa phambi koThixo uSomandla ngawe, zixolelwe kuwe; inokuthi sinokukucela ngokuqinisekileyo nentembelo, kukunikezelwa kuwe. Thatha umnikelo wethu, usinike izicelo zethu, uxolele into esiyixhalalayo, kuba uyona yedwa ithemba laboni. Kuwe siyathemba ukuxolelwa kwezono zethu, kwaye kuwe, Madoda osikeleleyo, ithemba lethu lomvuzo. UMariya oyiNgcwele, uncedise unesizi, uncede unxungupheke, uthuthuzele intlungu, uthandazele abantu bakho, unxusele abefundisi, unxusele kubo bonke abafazi abazinikezele kuThixo; Bonke abanokugcina umkhumbuzo wakho ongcwele banokuziva ngoku bakho uncedo kunye nokukhuselwa. Yilungele ukusinceda xa sithandaza, uze usibuyisele iimpendulo kwimithandazo yethu. Yenza kube lula kwakho ukuthandazela abantu bakaThixo, wena osikelelwe nguThixo, ufanele ukunyamezela uMhlengi wehlabathi, ophilayo nolawulayo, ihlabathi elingapheliyo. Amen.
Njani (kwaye Kutheni) amaKatolika enza uphawu loMnqamlezo
Umthandazo weNgxowa-mali kunye noPhantsi
IBhayibhile yeBhayibhile malunga nokuxolela
I-Grace Grace Imithandazo yokuSebenzisa ngaphambi nangemva kokutya
Iprofayili Yobomi - Abaphathi beeNkonzo zabasebenzi
Amandla Amandla Amakhosikazi Acula Ingoma yeBossa Nova Classics
I-Feng Shui ye-Kitchen Kitchen yakho
I-Recle Crystal Recipe
I-Ester Inkcazo kwiKhemistry
Yonke Imithandazo kwiCawa yamaKatolika
Imbali yamaLungelo eSigu eMelika
Iingcebiso zokuHlaba kwezoBusika ezine-4x4
6 Ukuqwalaselwa kweeNkcukacha zeMpahla yeeKhobho
Isingeniso kwi-American Basswood
Isitulo sesithuthuthu Ukuguqula ukusebenzisa ii-Jigs kunye ne-Fixtures
I-Demonest Demos Possession ne-Exorcism I-Horror Movies
Iingcebiso Zokukhusela I-Eye Strain
Imiboniso yeThelevishini yeFizikiki